Aliko Dangote Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
musha Africa Aliko Dangote Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuNigerian bhizimusi magnate anozivikanwa senge “Dangote". Yedu Aliko Dangote Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kweNigerian Billionaire kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Zvikuru zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva of yake Dangote Group mamiriyoni mabhiriyoni ehurumende, zvigadzirwa zvayo uye mabasa. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveAliko Dangote's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Aliko Dangote Yehucheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Aliko Dangote akazvarwa pazuva re10th yaApril 1957 muguta rekare rekutengesa reKano, muKano State, Nigeria. Akazvarwa kuna amai vake, Mariya Sanusi Dantata uye kuna baba vake, Mohammed Dangote.
Dangote wechiduku akaberekerwa mumhuri yakafuma uye akakurira muguta rakabudirira reKano State, achitarisa upfumi hweguta uye kusimudza mapiramidi emagetsi pamwe chete nevakoma vake vaduku, Sani naBello.
Bhuku rebhizimusi raB budding raingova nemakore gumi nemakore 8 paakafirwa nababa mu1965. Akazoberekwa nababamunini vake vanaamai, Alhaji Alhassan Dantata uyo aiva mumwe wevarume vakapfuma muguta reKano panguva iyoyo.
Alhaji Dantata anga asiri mutorwa kumabhizimusi akabudirira. Muchokwadi, akaita hupfumi hwakawanda kubva pakubudirira kutengesa mupunga, oats uye zvekuvakisa.
Mudiki Dangote akatevera sekuru vake vane hushamwari-bhizinesi vaainyatsocherechedza vachiri kukura.
Aliko Dangote Dzidzo:
Dangote ndeyekirasi yevanamuzvinabhizinesi vepamoyo avo vakatsvaga kuve vakadzidza zvisina tsarukano vachitsvaga basa rekuita basa.
Bhizimusi bhizimusi mukugadzira rakatanga kunyoreswa pachikoro chekutanga kana chepuraimari chinozivikanwa seSheikh Ali Kumasi Madrasa muKano State.
Paaive pachikoro, Dangote akavandudza pfungwa yekutanga yekuita mari nekuwana kubva kune vaaidzidza navo uye vadzidzi vechikoro.
"Ndinogona kuyeuka pandakanga ndiri muchikoro chepuraimari, ndaienda kundotenga makotoni emasipi uye ini ndaizotanga kuvatengesa kuti vawane mari. Ndaifarira zvikuru bhizinesi, kunyange panguva iyoyo. "
Anoyeuka Dangote yekutanga kwakanaka kwekare.
Pakazoedza kuita zvidzidzo akaona Dangote aine dzidzo yekondari kuChief High School muKano uye akadzidza bhizimisi uye kutungamira paAl-Azhar University muKairo, Egypt.
Aliko Dangote Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
1977 raive gore iro Dangote akarova pasi achimhanya sezvo asina kutambisa nguva kuwana mari yekutanga bhizinesi rake apedza kudzidza kuyunivhesiti.
Nepo akawanda masosi achiti Dangote akawana guta kubva kuna babamunini vake, Alhaji Sanusi Dantata, vamwe vanotaura kuti vaive sekuru vake Alhaji Alhassan Dantata vakamukweretesa mari.
Chero ipi nzira yekukakavadzana ichienda, Dangote akanzwika kuti akaburitsa kwaakabva capital yake yekutanga panguva yehurukuro:
“Ini ndaive nemari yandakapihwa pachena nasekuru. Akandikweretesawo N500, 000 (ingangoita $ 3,000) yaive mari hombe panguva iyoyo.
Chikwereti ichi chaifanirwa kubhadharwa pese pandaigona kubhadhara pamwe mushure memakore matatu kana mana. Zvisinei, ndakabhadhara zvese mukati memwedzi mitanhatu. ”
Kubva kuruboshwe kurudyi: Mudiki Dangote, sekuru Alhassan Dantata, sekuru Sanusi Dantata uye mushakabvu Qadiriyyah nyanzvi Sheikh Alin Kumasi.
Dangote akaisa chikwereti icho chakanaka kuburikidza nekugadzira izvo zvino zvinozivikanwa seDangote Group mu1977. Imwe yacho yakatanga sebhizimisi duku rebhizimisi iro ranga rekutengeserana rakaita sekutengeswa kwemashuga kubva kuBrazil uye mupunga kubva kuThailand.
Yakanga isiri kusvika 1997 kuti iyo kambani yakavaka yayo zvirimwa kuburitsa zvayaive ichipinza mukati memakore makumi maviri apfuura.
Nekukurumidza kumberi kusvika parizvino, Dangote Boka iri yakawanda-trillion-naira conglomerate yakasimuka kubva pakuva kambani diki yekutengesa kuenda kuboka hombe remabhizimusi muNigeria uye ine mashandiro muBenin, Ghana, Nigeria, uye Togo.
Aliko Dangote Wife:
Izvo zvinonzi kuti kumashure kwemurume wese akabudirira mukadzi asi pano panomira Dangote, zvichiratidza kuve anosarudzika uye akanaka pane izvozvo.
Iye murume akapfuma mu Africa anga aine mugove wake wekutadza michato uye kurambwa. Kutanga kwaive kuroora kwake mukadzi asingazivikanwe uyo anonzi akasarudzirwa iye nemhuri yake mu1977.
Nepo zvishoma zvichizivikanwa nezvekuti imba yakazopera sei, Dangote akadanana murudo makore mazhinji gare gare naNefisat, mwanasikana weanonoka Mutungamiri weNigerian, Musa Yar'adua mu2009.
Nefisat akashamisa akaramba kufambira mberi, achimusiya asina imwe sarudzo asi kuenderera mberi nekuroora Mariya AD Muhammad Rufai. Mubatanidzwa wakagumawo mukurambana.
Dangote akazoita runyerekupe rwekuti akambodanana nerunako mambokadzi Sylvia Nduka mu2013. Zvisinei, hapana humbowo hwekongiri hunotsigira zvirevo izvi.
Nekukurumidza kuenda ku2018, iro bhizinesi mogul rakaratidza kuti purogiramu yake yakabatikana ndiyo inokonzeresa hukama hwake hwakundikana. Maererano naye:
'Ini handisi kuzoita mudiki. Makore makumi matanhatu harisi dambe. Asi hazvina musoro kubuda uye kunotora mumwe munhu kana usina nguva '.
Kunyangwe zvakadaro, Dangote haana pasi pevane gumi nevashanu vana kusanganisira vatatu vanasikana vakura.
Vanasikana vanosanganisira Halima Dangote, Mariya Dangote naFatima Dangote. Ivo vatatu vakanaka vaive nedzidzo yakanaka muUnited Kingdom uye vanobata chinzvimbo chepamusoro muumambo hwababa vavo.
Kubva kuruboshwe kurudyi: Halima, Fatima naMaria Dangote.
Aliko Dangote Hupenyu Hwemhuri:
Dangote akaberekerwa mumhuri yakafuma ine ruzivo rudiki pamusoro pevabereki vake, vanasekuru nababamunini, vanamunini nevasikana. Zvisinei, pane huwandu hune ruzivo pamusoro pehama dzaakakurira.
Bill Gates Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Kutanga naDangote anonoka munin'ina Bello. Mujaya uyu akafa mutsaona yendege musi wa17 Ndira 1996 paainakidzwa nendege naIbrahim Abacha, mwanakomana weaimbova mudzvanyiriri weNigeria, Sani Abacha.
Kusvikira iye afa, Bello aive iye wepedyo munhu kuna Dangote uye aizivikanwa semunhu anofunga zvakanyanya uye anoona.
Anotevera ndiSani Dangote. Iyeye zvakare munin'ina waDangote. Sani anoshanda seMutevedzeri weMutungamiriri weDangote Boka. Iye zvakare ane mari muzvikamu zvakakosha zvehupfumi zvinosanganisira kurima, kubhengi, kugadzira uye oiri services.
Aliko Dangote Biography - Untold Basa Rechokwadi:
Dangote inogamuchira zvishomanana kupfuura 150 inoshevedza zuva rega rega kusataura ma tonnes eemails.
Iyo yakashanda yakashanda yebasa iri yakanyanyogadzirisa zvirongwa zvinomuona achingoshandisa maawa mashomanana kune dzimwe nyika.
“Dzimwe nguva ndinoenda kure kubva kuno (Nigeria) kuenda kuChina, ndonopedza maawa mashanu chete ndiri kuChina ndodzoka.
Ndosaka ndisingatore jeti yangu yakavanzika kuenda kuChina nekuti vatyairi vendege vanoda maawa ekuzorora, uye maawa avanoda, anova maawa mapfumbamwe, handina. Saka ndinofanirwa kutora Emirates. ”
Mutsetse webhizimusi muDangote Boka brand inoenda kupfuura kugadzirwa kwesimende uye kunatsa shuga.
Inosanganisira mimwe mitsara yakaita sekuchenesa munyu & mwaka, hupfu & semolina, kugadzira pasita, zvekutakura zvinhu, manejimendi manejimendi, mashandiro echiteshi, chikafu & zvinwiwa pamwe nekutakura.
Regina Daniels Childhood Nyaya Yekuwedzera Untold Biography Facts
Iri boka rinoteedzerawo miganho mitsva mukuchenesa & petrochemicals, zvivakwa, pombi yegasi uye kurima nechinangwa chekuona kuzvivimba muNigeria.
Dangote akapihwa kukudzwa kwepiri-kwepamusoro-soro kuNigeria, Grand Commander weOrder yeNiger (GCON) naimbove Mutungamiri weNigeria, Goodluck Jonathan musi wa14 Mbudzi, 2011.
Aliko Dangote Hupenyu hweMunhu:
Dangote ibhizimusi anoshanda nesimba ane nguva yakatarwa yemaawa makumi maviri nemana sevamwe vese. Anotanga zuva rake nekurovedza muviri aine zvakawanda zvaanofarira zvekumhanya. Anozorora kana achishushikana uye achitsanya kamwe chete pasvondo kubatsira kubvisa system yake.
Iye anoshanda wechiMuslim uyo anoenda nemusoro wezita 'Alhaji' uye ane akawanda philanthropic anoedza kuchikwereti chake. Nezve kuita kwake kwekunakidzwa, Dangote haana chaanofarira kuita chimwe kunze kwebasa!. Maererano naye:
"Handiiti basa rangu sechinhu chandinofanira kuita, ndicho chido changu. Maawa makumi maviri nemana nezuva rimwe chete haakwani. "
Aliko Dangote Mararamiro:
Dangote ine dzimba dzakawanda dzepamusoro mukati nekunze kweNigeria. Chinokosha pakati pevakawanda imba yake muBudja inokwana $ 30 mamiriyoni. Imba inochengetedza hupfumi yakagamuchira hupenyu hunoshamisa hunosanganisira Bill Gates.
Izvi hazvitauri kuti wekuNigeria wekutanga kupinda muForbes runyorwa ane mota dzinoverengeka dzinosanganisira Bentleys, Maybach, Mercedes neBugattis.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Aliko Dangote Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Efe Ajagba Yevechidiki Nyaya Yevechidiki uye Untold Biography Chokwadi